Ovarian Cyst ကိုယ်ဝန်မဟုတ်တဲ့ ဗိုက်ထဲကအလုံး - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Ovarian Cyst ကိုယ်ဝန်မဟုတ်တဲ့ ဗိုက်ထဲကအလုံး
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး လူဥ ခွဲစိတ်မွေးဖွာ့း လူမှာဥတဲ့ လူဥ့ မနက်ဆယ်နာရီလောက်၊ ဓနုဖြူ၊ ကျွဲလမ်းကုန်းရွာက့့။
ဒီသတင်းကိုတွေ့ဘူးလို့ ပြန်ရှာတော့ တွေ့ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သူနာပြုဆရာမ တယောက်ကနေ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အလုံးတခုကို ခွဲစိတ်ခန်း နောက်ခံထားပြီး ရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့အတူ ‘လူဥ’ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တွေ့လို့ ‘လူဥ’ မဟုတ် ‘မျိုးဥအိမ်အကျိတ်’ ပါလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
1. ကျွန်မကအသက် ၃၇ နှစ်ရှိ ကလေးတစ်ယောက်အမေပါ။သားအိမ်တွင် ဘယ်ညာနှစ်ဖက်လုံးတွင် 2.4mm ရှိ ရေအိတ်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအရာကြောင့်သားအိမ်ပြင်ပဖြစ်သော အူတို့တွင်ကလေးရှိနိုင်ပါသလား သိချင်ပါတယ်။
2. တပည့်လေးက ဗိုက်ထဲမှာ ရေအိတ်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခါတလေတော့ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာတယ်ပြောပါတယ်။ မနာရင်တော့လဲ လူကောင်းအတိုင်းပါ။ ဆရာမကြီးတွေနဲ့ပြတော့ ခွဲခိုင်းပါတယ်တဲ့။
မခွဲပဲအဆင်ပြေစေမဲ့နည်းလမ်းများရှိရင်လဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ခွဲရစိတ်ရမှာလဲကြောက်တတ်တော့ မခွဲပဲကြာနေပါတယ်ဆရာ။ မခွဲပဲ ထားရင်ရော ကင်ဆာတွေ ဘာတွေအဆင့်ထိဖြစ်လာနိုင်ပါသလားဆရာ၊
အခုတော့ သူရိုက်ထားတဲ့အနီးကပ်ဆုံး မှတ်တမ်းစာရွက်တွေကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
3. ဆရာရှင့် (၁) ကျွန်မ အသက် ၂၅ တုံးက ရေအိတ် ထုတ်ဖူးပါတယ်။ သားဥပြွန်တခုပါ ထုတ်လိုက်ရလို့ ယခု အသက် ၃၃ နှစ်မှာ ကလေးယူဖို့ လွယ်ကူနိုင်ပါသလား။ ဘာအခက်အခဲများ ရှိနိုင်ပါသလဲ။ နောက်နှစ်မှာ ကလေးယူဖို့အတွက် ခုချိန်မှာ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါး၊ ဘာတွေ ကြိုတင် မှီဝဲဖို့ လိုပါသလဲ။ (၂) ရေအိတ်က ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲ သေချာသိချင်ပါတယ်။ အပျို-အအို မရွေး အသက်အရွယ် မရွေး ဖြစ်နေတာကိုလဲ တွေ့နေရပါတယ်။ Ovarian Cyst လို့ ရေးထားပါတယ်။ မခွဲခင်က ဗိုက်မသိမသာလေး ပူပါတယ်။ နဂိုက ပိန်တဲ့လူဆိုတော့ ဝလာသလို ထင်ရတယ်။ ဗိုက်ဆာလို့ အစာစားမယ်ဆိုတော့ နဲနဲဘဲ စားရသေးတယ်၊ ဗိုက်က ပြည့်သွားပြီး၊ ဗိုက်တင်းသွားတယ်။ ဆက်စားချင်ပေမဲ့ မစားနိုင်တော့သလိုဖြစ်တယ်။ ရင်ပြည့်နေသလို ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလောက်ဘဲ ခံစားရပါတယ်။ အိတ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြည့်တော့လဲ ဘာမှမထူးခြားဘူး။ ဗိုက်ထဲမှာ အလုံးဖြစ်နေမလားဆိုပြီး။ စိုးရိမ်လို့ ဆေးခန်း သွားတော့မှ ရေအိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ရေအိတ်ထဲမှာ အရည်နောက်နောက်တွေလို့ဘဲ ပြောပါတယ်။ တခြားဟာတွေ တွေ့တယ်လို့တော့ မပြောပါဘူး။ သားဥပြွန်မှာ သွေးကြောတွေ ရစ်ပတ်နေလို့ ရေအိတ် ထုတ်ရ ခက်တဲ့အတွက် အဲဒါပါ ထုတ်လိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒုတိယမေးခွန်းတခုမှာ ‘မ’ မပါလို့ တပည့်က ယောက်ျားလေးလား၊ မိန်းကလေးလား မသိရသေဘဲ မေးခွန်းကို ဆက်ဖတ်နေခဲ့ရတယ်။ နောက်မေးခွန်းတခုမှာ သားအိမ်မှာမဟုတ်ဘဲ၊ မျိုးဥအိမ်မှာ ဖြစ်တာနေမယ် ထင်ပါတယ်။ မတူပါ။ သားအိမ်က တခုတည်းရှိတယ်။ ဘယ်-ညာဆိုရင် မျိုးဥအိမ်ဖြစ်ပါမယ်။ ကုသလို့ရပါတယ်။ ၂့၎ စင်တီက မကြီးလှပါ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကလေးအသက် မသိရပါ။ ရာသီ မသိရပါ။
အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီးတိုင်း မျိုးဥအိတ်မှာ အလုံးဆိုတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကုစရာမလိုဘဲ ပျောက်သွားတာက များပါတယ်။ ကုစရာလိုတဲ့ Ovarian Cyst မျိုးဥအိမ်အကျိတ်ဆိုတာကလည်း အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတခုပါ။ အရွယ်မရွေး ပြောရမလားဘဲ။ အပျိုလေးတွေရော အဖွါးကြီးတွေကိုပါ ခွဲပေးရဘူးတယ်။ ကျူးမားခေါ်တဲ့ အလုံး-အကြိတ်တွေဟာ ကင်ဆာ မဟုတ်တာရော ဟုတ်တာပါ၊ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ အတိအကျ ပြောမရတဲ့ အမျိုးအစားပါ။ ကံတရားကိုသာ လွှဲချကြရအောင်။
မျိုးဥအိတ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ဘယ်နဲ့ညာ တခုစီရှိတယ်။ သားအိတ်ဘေးက ချိုလိုထွက်နေတဲ့ သားအိတ်ပြွန် နှစ်ဘက်ရဲ့ အဖျားဘက် အောင်နားမှာ တွဲလောင်းလေး ရှိနေတယ်။ အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီး တဦးရဲ့ မျိုးဥအိတ်က ၃ x ၁့၅ x ၁့၅ စင်တီမီတာ အရွယ်ရှိတာပါ။ လက်တဆစ်လောက်ပေါ့။ ဒီဟာလေးကနေ Ovarian Cyst ဖြစ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရင့်မာ အရွယ်လောက်ထိ ကြီးလာနိုင်တယ်။
တခါ ဖြစ်ဘူးရင် နောက်ထပ် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါ။ ရာသီ မမှန်ရင်။ သိပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက ၁၁-၁၂ နှစ် သမီးကစ ရာသီကလာရင်၊ ကလေးမရတဲ့သူ၊ လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း နည်းသူ၊ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း အဆီများသူ တွေမှာ ဖြစ်တတ်လေ့ရှိတယ်။
အိတ်ထဲမှာရှိနေတာက အမျိုးမျိုး။ အများအားဖြင့် ခပ်ဝါဝါအရည်။ ချွေးထွက်အိတ်ထဲက အရည်မျိုးပါရင် ခပ်မြစ်ပြစ် ဖြစ်မယ်။၊ အဆီတွေ ပါနိုင်တယ်။ တချို့ကြ ထူးဆန်းတာတွေ ပါနေတတ်တယ်။ ဆံပင်လို အမွှေး၊ အရိုးလို၊ သွားလို၊ အရိုးနုလို စတာတွေ။ တောမှာ “အပင်းထည့်တယ်” လို့ ပြောတတ်ကြတာမျိုးပေါ့။ Dermoid cyst ဒါးမွိုက်-ဆစ် ခေါ်တယ်။ အမှန်က လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ရှိနေတဲ့ (တစ်ရှူး) အမျိုးအားလုံးက ပါနေနိုင်တယ်။ မျိုးဥအိတ်သာ မဟုတ်ပါ အရေပြားမှာလည်း ဒါမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုရင် OG နဲ့ ပြပါ။ အရင် ခွဲစိတ်မှတ်တမ်းတွေ သိမ်းထားဘို့ လိုမယ်။ ခွဲစိတ်ထားပြီး၊ ချက်ချင်း ကိုယ်ဝန် မယူသင့်သေးပါ။ သန္ဓေ တားဆေးသုံးရင် မျိုးဥမထွက်စေတာမို့ မျိုးဥအိမ်အကျိတ် ဖြစ်မှာကို တားဆီးပေးရာကျတယ်။ ကလေး ယူတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်တားဆေး မသုံးဘဲ၊ ကြာရင် IUCD သားအိမ်ထဲပစ္စည်းထည့်နည်းသုံးပါ။ မကြာရင် ကွန်ဒွမ် သုံးသင့်တယ်။ တဖက်ထဲကသာ မျိုးဥ ထွက်နေရသူမို့ ထွက်နေစေချင်တယ်။ ၃-၄ လအကြာ၊ ဘာမှ မတားတော့ရင် ကလေးအမေ အခေါ်ခံရပါတော့မယ်။
ဓါတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ အရွယ်အစားလောက်ရှိမဲ့ မျိုးဥအိမ်အလုံးကြီးကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က KNU ကရင် ဆေးရုံလေးတခုမှာ ကြုံကြိုက်လို့ ခွဲပေးခဲ့ရဘူးပါတယ်။ ဆေးရုံကလဲ တောထဲမှာ၊ ကင်မရာလဲမပါလို့ ဓါတ်ပုံမရိုက်နိုင်ပါ။